Dagon Seikkan Township.
East Dagon Township.
Hlaing Thayar Township.
Mingalar Taung Nyunt Township.
North Dagon Township.
North Okkalapa Township.
South Dagon Township.
Shwe Paukkan Township.
Shwe Pyi Tha Township.
Aung Myay Thazan Township.
Aung Thayar Myothit.
Chan Aye Thazan Township.
Chan Mya Thasi Township.
Maha Aung Myay Township.
Myit Nge Township.
Pathein Gyi Township.
Pyi Gyi Tagun Township.
Dakhina Thiri Township.
Ottara Thiri Township.
Pobba Thiri Township.
Zabu Thiri Township.
Zeyar Thiri Township.
Aung Zeya Myothit.
Aye Thayar Myothit
Htan Ta Pin Tsp.
Kan Thayar Myothit.
Kun Chan Kone Tsp.
Long Lon Tsp.,
Ma Hlaing Tsp.
Myit Thar Tsp.
Nan Oo Myothit.
Seik Kyi Kanaung To Tsp.
Sint Kaing Tsp.
Tabate Kyin Tsp.
Tadar Oo Tsp.
Ngan Zun Tsp.
Ngar Thine Chaung Tsp.
Wat Lat Tsp.
Thone Khwa Tsp.
Myauk Ywar Tsp.
Browse Search Main Categories
Blue Diamond Cement Cement – Wholesalers and Manufacturers
Kyaytinepyin Kwin, Pyi Nyaung Village Tract, Tharzi Township, Meikhtila District, Mandalay Region, Myanmar.Mandalay
01 - 507115 , 09 777777688
Blue Diamond Cement Highland Cement International Co., Ltd. (HCI) isajoint venture company established by LG International Corp. Which isaKorean global project development and investment company that has launched its own cement brand – Blue Diamond Cement.
Highland Cement International Co., Ltd. သည် LG Internatiobal Crop. မှ တည်ထောင်ထားသော ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ LG International Corp. သည် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီစီမံကိန်းများနှင့် စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများစွာတို့ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ကိုင်နေသော ကိုရီးယားကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ Blue Diamond Cement Highland Cement International Co., Ltd. မှ ထုတ်လုပ်သော ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် ဘိလပ်မြေဖြစ်ပါသည်။
Brand : Blue Diamond Cement
Standard : ASTM C-150 Type1 (Conforming to EN 197-1:2000)
Type Dry Process
Capacity 1,500 TPDv
O&M Korean O&M Team
(From LG International)
Blue Diamond Cement is proudly manufactured in Myyanmar using technology and experts from Korea and state of art on-line quality control system. HCI is committed towards providing the premium quality in cement products to the customers and communities in Myanmar.
Blue Diamond Cement ကို ကိုရီးယားမှ အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များတို့၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် မြန်မာပြည်တွင်ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ကနဦးအစတွင် တစ်ရက်ကို ဘိလပ်ပြေတန်ချိန် (1500) ထုတ်လုပ်ပါသည်။ Highland Cement International Co., Ltd. သည် မြန်မာပြည်၏ သုံးစွဲသူများနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း အဆောက်အအုံအတွက် အရည်အသွေးပြည့်မီသော အဆင့်မြင့်ဘိလပ်မြေများကိုသာထုတ်လုပ်ပါသည်။
Store under shade, away from direct sunlight.
Do not store in direct contact with ground to prevent moisture.
Stack no more than 10bags during storage.
နေရောင်ခြည်မရသော အရိပ်ထဲတွင်ထားပါ။ စိုစွတ်သောမြေပြင်ပေါ်တွင်သိမ်းထားခြင်း မပြူရပါ။
(၁၀) အိတ်ထက်ပို၍ ထပ်သိမ်းခြင်းမပြူရပါ။
Mixing ratio only for reference. Consult with your civil engineer first.
Do not leave concrete surface too dry during curing.
ဘိလပ်မြေ မရောစပ်ခင် သင့်ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာနှင့်တိုင်အင်ပြီးနောက် အညွှန်းအတိုင်းအချိုးညီစွာရောစပ်ပါ။
ကွန်ကရစ်လောင်းနေစဉ်အတွင်း မျက်နှာပြင် မခြောက်သေးသရွေ့ မထွက်သွားပါနှင့်။
SAFETY MEASURES (လုံခြုံမှုအတွက် တိုင်းတာခြင်း)
Wear protective gear to protect eyes and face during application.
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မျက်လုံး နှင့် မျက်နှာပြင်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သော ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများကို ၀တ်ဆင်ရမည်။
In case of contact with eyes, wash with purified water and seek medical attention immediately.
မျက်စိအတွင်းသို့ ဘိလပ်မြေမှုန့် ၀င်ရောက်ပါက သန့်စင်သောရေနှင့် ဆေးကြောပြီး ဆေးကုသမှု ချက်ခြင်းခံယူရပါမည်။
Wear gloves during application. Keep out of reach of children.
ဘိလပ်မြေမှုန့် အသုံးပြုနေစဉ် လက်အိတ်များ ၀တ်ဆင်ထားရမည်။ ဘိလပ်မြေများကို ကလေးများနှင့် ဝေးရာတွင်ထားရှိရမည်။
Highland Cement International Co., Ltd.
Kyaytinepyin Kwin, Pyi Nyaung Village Tract, Tharzi Township, Meikhtila District, Mandalay Region, Myanmar.
ကျေးတိုင်ပြင်ကွင်း၊ ပြည်ညောင်ရွာပြင်၊ သာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာ။
Kyatinepyin Kyin, Pyi Nyaung Village Tract, Thar-zi Township, Meikhtila District, Mandalay.
Yangon (Branch Office)
9-A, Mya Kanthar 2nd Street, 2nd Ward, Kamaryut Township, Yangon.
Mandalay (Branch Office)
43/1, 35th St., Bet. 69th St. & 70th St., Mahar Aung Myay Township, Mandalay.
No. (18/S), 3rd Floor, Bet. 31st Street &
32nd Street, Mandalay.
Copyright@1999-2017 Myanmar Yellow Pages. All rights reserved by IMEX Myanmar Co., Ltd. ×